Manainga & Fametrahana-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Home>Our Services>Mavesatra>Angatahana sy fametrahana
Karazan'entana fitaterana maro no tokony hatao ho an'ny fitaterana cargos mavesatra amin'ny tetikasa injeniera an-trano sy iraisam-pirenena, izay matetika voafatotra amin'ny alàlan'ny fitaterana toy ny fahaiza-miakatra, ny lalan'ny lalana, ny lalana sy ny fanamboarana ny tetezana, ny fantsona ary ny haavony ary ny fitsipika sasany eo an-toerana, mahatonga ny fizotrany sarotra sy sarotra.
Ny fomba hamenoana ny fitaterana ireo cargos mavesatra am-pilaminana, ara-toekarena, mahomby ary antonony no fanalahidin'ny fahombiazan'ny fanatanterahana ny tetikasa.
Ny fitateran'ny cargos mavesatra dia hojerena ny tena toerna, ny toerana famokarana, ny lalana fitaterana, ny fomba fitaterana, ny fampidinana ary ny fampidinana ny seranan-tsambo, ny fitaovana fanamoriana eny an-toerana sy ny zavatra hafa mifandraika ary ilaina ny fanatanterahana ny famaritana azo atao.
Ny fanamafisana entana amin'ny cargos mazoto dia izao no fototry ny fampiharana ny tetik'asa injeniera. Misy fepetra tokony harahina mba hiantohana ny fahombiazan'ny fananganana sy ny fametrahana.
Ny fizotran'ny asa fanandratana sy fametrahana
1.Ny fandefasana entana eto an-toerana: amboary ny fitaovana mavesatra hanamboarana ary hametraka rehefa vita ny fiomanana rehetra.
2. Ny asan'ny fanaovan-jaza alohan'ny hanakorontanana: ilaina ny fisavana sy ny fanamarinana.
Ohatra: Diniho raha marina ny fitaovana ary misy marika fametrahana; na mahafeno ny fepetra takian'ny fisandratana ny fanesorana ny fitaovana
3.Fampandehanana fanakorontanana: anisan'izany ny fanantonana onjam-paosy, ny fitsapana ny fihenjanana ary ny fanitsiana azimuth ny famatsiana herinaratra, ny toeran'ny rafitra fanantonana sy ny fananganana.
4. Fanandramana fanandramana: alohan'ny fanadinana dia avereno ary avereno manaraka ireto manaraka ireto:
Ny baiko ankapobeny mihanaka dia manatanteraka ny fanamafisana ny fandidiana fanamafisana; amboary ny hevi-dehibe sy ny votoatin'ny fanendrena ny mpanara-maso mpanara-maso; ny fanadinana matetika amin'ny fanandramana sy ny fanadinana dia mahatonga ny faritra rehetra hiasa tsara sy voarindra ary mandinika ny fiovan'ny fizarana tsirairay.
5.Mandeha eny an-toerana: ny komandin'ny jeneraly lehibe dia manome baiko amin'ny fomba ofisialy ny komandin'ny komandy rehetra mba hanamarina ny toeran'ny laharana tsirairay ary jereo raha ara-dalàna ny rafitry ny baiko; ary ampahafantaro ny mpiambina ny baiko.
Mandritra ny fanandratana, avereno ny fitaovana rehefa avelao ny fanampiana vonjimaika mihoatra ny 500-800mm ary manaova fisafoana fanampiny mba hahazoana antoka raha mandeha tsara ny zava-drehetra;
Manaraka izany mba hanesorana ny fanohanana ny fitaovana ary manohy manangana.
Fanamarihana fanidiana ho an'ny fanandratana crane
1. Mamindra na midina
(1) Voaro mafy ny fanamaintanana na be karama indrindra mifanaraka amin'ny lisitry ny entana.
Mandrara ny fisarahana amin'ny rafitra ACS mandritra ny fizotran'ny crane manontolo.
Mandrara ny fampidinana ireo cargos enta-baravarana eo anoloana na eo amin'ny sisin'ny sandry.
Mandràra ny entana mifono entana eo anoloan'ilay taxi.
(2) Aza manosika sy misintona mafy ilay goavambe mandritra ny fandidiana.
Alohan'ny hisandratana dia alao antoka fa ilay lefitra clutch amin'ny toeran'ny fiatoana.
(3) Ny fandidiana faran'izay maimaim-poana dia azo ampiasaina ihany rehefa mampidina ny fantsom-bidy na rehefa tsy ampy ny 30% amin'ny vesatra azo avela. Voarara ny fikoropahana vonjy maika amin'ny rivo-doza.
(4) Ny kodiaran-tsofina mivezivezy dia tokony hikatona rehefa manainga entana mandritra ny fotoana maharitra. Fa aza hikatona ny kodiarana amponga rehefa midina ireo entana.
5) Tandremo ny fampitandremana rehefa manandratra ny fampandehanana.
(6) Tsy misy olona miditra ao amin'ny faritra fanairana, afa-tsy ireo mpanisy marika.
(7) Mandritra ny fisandratana, tazomy ny elanelan'ny fiarovana eo an-tampon'ny boom sy ny afovoan'ny tsipika eo anelanelan'ny ①6.6kv / 3m ②66k / 5m③275kv / 10m, raha misy lozam-pifamoivoizana mitranga.
(8) Rehefa miaraka amina cranees roa ny entana dia takiana ny komandy mitambatra. Ankoatr'izay, ny fampisehoana sy ny hafainganam-pandehan'ny kroa roa dia tokony hitovy hatrany. Ny vidin'ny entana mavesatra tsirairay dia tokony ho latsaky ny 80% ny isan'ny kaontaly iray noheverina: Ny lanjan'ny enta-mavesatra dia tsy mihoatra ny 75% amin'ny fitambaran'ny milina roa.
(1) Aza mitera-doza na rotika vonjy maika raha sendra misy loza manelingelina.
(2) Mandritra ny fihodinan'ny mpamily, ny mpamily dia tokony handinika raha misy olona mandeha an-tsambo na misy sakana any aoriana.
(3) Sahano ny famadika kapila rehefa vita.
3.Mampandeha boom-pifandraisana teleskopika
(1) Tsy misy enta-mavesatra miaraka amin'ny lefona sandry.
(2) Rehefa ampiasaina ny teleskopôzôjia dia tokony hisy elanelana iray eo anelanelan'ny fehy sy ny fihodinana. Rehefa atsangana ny sandry ivelany dia tokony hihazona ambany kely kokoa ny fihodinana.
(3) Raha miitatra ny halavan'ny sandry lehibe amin'ny halavany tanteraka, ny zoro sandry ny sandry dia tsy tokony ho latsaky ny zoro ambany indrindra voafaritra ao amin'ny boky torolàlana, raha tsy izany dia milentika ny milina iray manontolo.
Ny crane misy kodiarana mitondra ny entana
Raha ny crane misy kodiarana mitondra ilay entana, dia tokony ho malama sy tomobosa ny lalana, ary ny lanjan'ny entana dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny fitsipiky ny mpanamboatra.Ny haavon'ny cargos mavesatra dia tsy hihoatra ny 50cm avy amin'ny tany, mifamatotra amin'ny tady misintona.Mihodina miadana.
Voarara mafy ny mitondra fiara lavitra ny entana mitondra entana
5.ny toro-hevitra aorian'ny fanandratana
(1) Avereno tanteraka ilay boom-miakatra ary apetraho eo amin'ny bracket.
Ny fanamboarana ny fantsony arakaraka ary takiana ary manosihosy ny latabatra mihodina
(2) Ny tongotra dia averina ao anatin'ny filaharana voatondro ary azo antoka
(3) Avereno any an-trano mankany amin'ny fiantsonan'ny fiara ny crane
Sohologistics dia afaka manome fitaovana fampakarana sy fampandehanana s.
Ny fitaovana fampitaovana lehibe dia ahitana kamiao forklift, cranes kamiao, Cranes Crawes, kamiao mody misy haingam-pitotoana (kamiao manindrona ny tenany manokana) fiaramanidina misy tilikambo, cranees mitsingevana.
FIVORIANA MANARAKA INDRINDRA AN-TRANO any CHINA
Type MIVADIKA AN-TRANO TOROHEVITRA MANGALATRA MAMPIAVAKA TANANA TOROHEVITRA FAHAFATESANA RANO FIOMPOANA RARAKA RANOMASINA FORKLIFTS
Range Load Range
Jacking sy mivezivezy dia ampiasaina betsaka amin'ny famindrana rafitra lehibe mandritra ny logistic tetikasa Sohologistics. Ireo hetsika ireo dia tena mahomby amin'ny ekipa teknika sy operasional mahay.
Toy ny mahazatra hatrany, amin'ny famokarana vahaolana bespoke ho an'ny mpanjifantsika, ny fiarovana dia mijanona ho laharam-pahamehana lehibe indrindra ho dinihana.
1. Fampandrenesana jacking sy skidding fampidirana fohy
Ny teknolojia hidirana hidirana sy ny teknolojia fanaingoana skidding dia misy fizarana telo: lalamby, torimaso ary jiro sy rafi-pandehanana hidraulana. Izy io dia ahitana ny paompy famatsiana menaka mahery vaika, manasaraka ny hidro hydraulic ary in-orbit mavesatra entana mihetsika.
Amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny hydraulic jack ao amin'ny biraon'ny paompin-tsolika avo dia avo ny tsangambato, ka ny gara kosa dia apetraka eo ambonin'ilay mpanova. ary ao anaty orbit misy entana mavesatra mitondra fiara dia mamindra ny mpanova izay eo amin'ny.
2.Ny jacking jacking sy ny teknolojia ara-teknika sy ny teknolojia fananganana
1) Fitsipika ara-teknika
Fitsipika ara-teknolojia sy hidin-drivotra hidradrama: fantsona hidraulika roa dia mampifandray ny bomba fantsom-pirazanana avo lenta miaraka amin'ny jack jack hidraulika, ary mandritra izany fotoana izany, dia manodina tobin-tsolika famenon-tsolika avo amin'ny toerana telo misy lalana efatra, valiny hidirana hidradrano dia hamoaka tsindry sy jiro hidraulika jacks ny mpanova ny sisin'ny lalamby ary mamily ny entana mavesatra miorina amin'ny fototry ny mpanova. Taty aoriana, amin'ny alàlan'ny fanalavirana ilay mpanova ivelan'ny lalamby ary miaraka amin'ny fiantsonan'ny pump pump, miverina amin'ny fototra ny mpanova.
2) Teknolojia fanamboarana
Ny fizotran'ny asa fanamboarana:
Famaritana ny lalan'ny fanodinana fanodinana
Hodi-lalana sy fanadiovana tranokala
Jacking mpanova amin'ny alalan'ny tsindry hidraulika
Transformer amin'ny toerany
Transformer jacking sy nidina avy amin'ny tsindry hidraulika